Jolay 18, 2011 amin'ny 2:14 PM
Vao nihazakazaka namakivaky ity lahatsoratra ity androany maraina. Te-hizara ny traikefako tamin'ny Google aho tamin'ny herinandro lasa teo, ary henoko raha toa ka nisy nanjo azy ireo…
Izaho dia vaovao amin'ity asa ity, izay vao niasa manontolo andro nandritra ny 2 herinandro (asa tapa-potoana nandritra ny 2 volana talohan'izay). Nahazo sata "olona mahafeno fepetra" avy amin'ny Google aho herinandro lasa izay.
Tamin'ny herinandro lasa taorian'ny nandihy manodidina ny politikan'ny marika nandritra ny fotoana niasako teto, dia tonga tamin'ny teboka farany aho. Nanana doka vaovao maromaro nolavina aho izay tsy dia hafa loatra amin'ny fampiasana ny teny marika amin'ny doka hafa izay efa nekena. Nandefa mailaka aho, nangataka fanazavana momba ny antony tsy nankasitrahana ireo doka ireo fa ny hafa kosa dia nety.
Tahaka ny nanehoanao hevitra momba ny teny fanalahidy, ny fahazoako dia ny teny fanalahidy dia olana misaraka amin'ny lahatsoratra doka. Saingy rehefa nahazo valiny avy amin'ny Google momba ny fanontaniako aho, dia izao no nolazain'izy ireo tamiko momba ny teny fanalahidy sasany nananako tao amin'ireto vondrona doka ireto:
"Ny sasany amin'ireo teny fanalahidy dia kely ny habetsahan'ny fikarohana ary mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-kevitra farany amin'ny dokao izany, noho izany, manoro hevitra anao aho hanaisotra ireo teny fanalahidy ireo amin'ny lisitry ny teny fanalahidy."
Rehefa nanoratra indray aho mba hangataka fanazavana momba ity lohahevitra ity ary azonao atao ve ny manondro ahy amin'ny fitaovana azoko vakiana mba hisorohana ny olana amin'ny ho avy, dia tsy nanome fanampiana izy ireo. Nolazaina indroa aho mba hanesorana ireo teny fototra amin'ny habetsahan'ny fikarohana ary hampavitrika ireo teny fanalahidy miato satria mety hisy fiantraikany amin'ny fankatoavan'ny doka izany indraindray. Nahoana?
Ny kaontiko Google Adwords dia tsy niasa nandritra ny herintaona teo ho eo. Saingy nametraka $10 tao amin'ny kaontiko adwords aho tamin'ny farany, namorona doka ho an'ny tranokalako vaovao. Ary ny ampitso dia nampiato ny kaontiko i Google. Nandefa mailaka azy ireo aho ary nanontany ny antony nampiatoan'izy ireo izany, ary nanoratra izy ireo ary nilaza fa tsy afaka manafoana izany, ary nanome ahy ny antony. Namaky ny politikan'ny dokambarotra aho sns., ary tsy hitako izay maharatsy ny doka na ny tranokalako. Ny doka dia mifandray mivantana amin'ny pejiko fivarotana, ary mivarotra vokatra marina izay mitentina arivo dolara ho ahy izay noforonin'ny programmer. Angamba ny Google Adwords dia tsy mamela ny olona hiditra amin'ny pejy fivarotana intsony? Tsy fantatro izany. Nampidiriko tao amin'ny doka ny vidin'ny vokatrao ka izay afaka mividy ihany no manindry ny rohy. Nahantona ny kaontiko ve ny vidin'ny doka? Mampisavoritaka ny miezaka mamantatra izany. Mety tsy maintsy manafoana ny kaonty aho, very ny $10, ary manomboka amin'ny kaonty vaovao. Saingy amin'ny fehezan-teny milaza fa raha mihantona ny kaonty dia haato mandrakizay ny kaonty vaovao hafa noforoniko, ary tsy afaka manao dokambarotra miaraka amin'izy ireo intsony aho. Tena mampisavoritaka izany.
Marina 100% ianao amin'ny fampiasana kopia doka sy firafitry ny teny fanalahidy nokendrena - manana mpanjifa amin'ny orinasa pneu/rims fiara izahay ary ny ankamaroany dia momba ny rambony lava ho azy ireo miaraka amin'ny radius manokana sy ny sakan'ny kodiarana miasa tsara amin'ny fitambarany. Raha tianao ny hijery ny kaontinao aho sy hieritreritra soso-kevitra sasany dia alefaso mailaka aho simon.b@resultsdriven.org. na afaka mametraka antso haingana izahay raha tianao ny telefaona 302-401-4478.